Ukubhiyozela ukumiliselwa kwe KleverIkhonkco ngoMatshi, i-31 sinikezela nge-1,000,000 yeedolaKLV ukuba 1000 abaphumeleleyo kwezi zilandelayo 72 iiyure
Klever uchithe ishumi leminyaka edlulileyo esakha izisombululo ze-blockchain kunye neemveliso zezigidi zabasebenzisi kwihlabathi liphela. Kule nkqubo, sifunde okuninzi malunga netekhnoloji ye-blockchain, i-cryptography, ukungaguquki, kwaye yeyiphi itekhnoloji esebenza kakhulu ekwandiseni ukusebenza okuphezulu, isantya, ukhuseleko kunye nokuthembeka.
I-CEO yethu, u-Dio Ianakiara usanda kuqalisa i-giveaway. Landela amanyathelo kwiTweet kwaye uthathe inxaxheba ngoku.
Lixesha lokuba a #Klever block Chain #Nikeza
Sinikezela nge-1,000,000 $KLV ukuba 1000 abaphumeleleyo lucky elandelayo 72 iiyure.
Kufuneka kuphela ukuba RT + Ndilandele kwaye @klever_io
Yanga amandla angaba nawe 👊 #KLV #KFI #DVK #Kleveritsheyini
-Dio | Klever (@dio_ianakiara) January 6, 2022
Imigaqo neMiqathango, iE&OE iyasebenza